कामना सेवाद्वारा दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक, कस्ता देखिए मुख्य सूचकहरु ? - Arthatantra.com
कामना सेवाद्वारा दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक, कस्ता देखिए मुख्य सूचकहरु ?
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । योसंगै बैंक चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने पहिलो बैंक पनि बनेको छ ।
प्रकाशित वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा ३४ करोड ३६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ११ .८९ प्रतिशतले कमी हो । गत वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकले ३९ करोड ४७ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
उक्त अवधिमा बैंकले ९० करोड ५९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । गत वर्षको पुस मसान्तसम्मको तुलनामा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३१.६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ६८ करोड ८० लाख ८९ हजार रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।
बैंकले चालु आवको दोास्रो त्रैमासमा संचालन मुनाफा ४१.५१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४९ करोड ९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको संचालन मुनाफा ३४ करोड ६९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
उक्त अवधिमा बैंकको वितरण योग्य मुनाफा ९ करोड ६७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको चुक्तापुँजी ३ अर्ब १४ करोड २५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले जगेडा तथा कोषमा भने १ अर्ब ३ करोड ७८ लाख २२ हजार रुपैयाँ राखेको छ ।
उक्त अवधिमा बैंकले ४७ अर्ब ७३ करोड २४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि ४३ अर्ब १ करोड ५५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
उक्त अवधिमा बैंकको खराब कर्जा ०.१८ प्रतिशतले वृद्धि भई १ं७७ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २१ रुपैयाँ पैयाँ ८७ पैसा, प्रतिसेयर नेटवर्थ १३३ रुपैयाँ २ पैसा रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ माघ ४ मंगलवार ०९:०८ मा प्रकाशित
अघिल्लाे तीन बर्षयताकै बढी राजस्व उठेको अर्थमन्त्रालयको दावी
पछिल्लाे छुट्ला है प्रिमियर इन्स्योरेन्सको लाभांश, सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका